Jamaahiirta Man United oo dhagahooda uu kusoo dhacaaya war farxad u leh...
Sunday, November 18th, 2018 - 15:18:05
Sunday April 02, 2017 - 07:38:02 in Wararka by Kubad Bile
Xidigaha khadka dhaxe ee kooxda Manchester United Paul Pogba ayaa dib ugu soo laabtay tababarka kooxda Jose Mourinho.
Pogba oo 24sano jir ah ayaa dhaawac muruqa ugu maqnaa kooxdiisa tan iyo Maarso 16-keedii. Paul dhaawaca wuxuu soo gaaray intii lagu guday kulankii Europa League kooxdiisa ay garaacday Rostov.
Xiddiga reer Faransa ayaa u dhow inuu garoomada kusoo laabto. si kastaba ha ahaatee. kadib markii uu tababartay maalintii sabtida.
United ayaa barbaro 0:0 West Brom kula gashay Old Trafford. kahor kooxda inteesan helin xidigaha markaasi dhaawacyada iyo ganaaxa kaga maqnaan. ciyaaryahaanadaasina waxaa ka mid ahaa Paul oo kooxdaan u ah laf dhabar.
United ayaa sidoo kale waxee dib u heshay Zlatan Ibrahimovic iyo Ander Herrera oo labadaba kooxda kaga maqnaa ganaac. Inkastoo Wayne Rooney uu nasiib u yeeshay ciyaartii shalayto inuu gadaal kusoo galo. xili loo badanaayay inuu kamid noqon doono xidigaha Kooxdiisa ay lumin kartay.
United ayaa waxee la ciyaari donntaa kooxda Everton habeenka talaadada.Jose Mourinho ayaa fadhiya kaalinta shanaad ee Premeir League. walow afar dhibcoodee ka hooseeyaan kooxda City oo ah kaalinta afaraad. laakiin waxaa mudan inla ogaado kulanka Arsenal Vs City inee wax badan ka badali karto kala haroonta horyaalka. hadii Gunners ee guuleeysato United ayaa dagi donnto kaalinta lexaad.